Fiainan-tsi-hita (kristianisma) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiainan-tsy hita (kristianisma))
Ny fiainan-tsi-hita na fitoeran' ny maty dia toerana misy ny olona aorian' ny fahafatesana, araka ny fampianaran' ny fiangonana kristiana. Lazaina koa fa nidina tany amin' io toerana io i Jesoa taorian' ny fahafatesany.
Lohasahan' i Hinôma, niavian' ny teny hoe "Gehena"
1 Voambolana ao amin' ny Baiboly malagasy
1.1 Voambolana prôtestanta
1.2 Voambolana katôlika
1.2.1 Fitoeran' ny maty
2.1 Loharano avy amin' ny lovantsofina jiosy
2.1.1 Seôla na Seôly
2.2 Loharano avy amin' ny fedrà grika
3 Fiainan-tsi-hita araka ny Baiboly
3.1 Fiainan-tsi-hita ao amin' ny Baiboly prôtestanta malagasy
3.2 Fitoeran' ny maty sy Afobe ao amin' ny Baiboly katôlika malagasy
3.2.1 Andalana ahitana ny hoe "afobe":
3.2.2 Andalana ahitana ny hoe "fitoeran' ny maty":
3.2.3 Andalana ahitana ny hoe "Fonenan' ny maty":
3.3 Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe fiainan-tsy hita ao amin' ny Baiboly prôtestanta malagasy
3.4 Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe Afobe na Fitoeran' ny maty ao amin' ny Baiboly katôlika malagasy
4 Firesahana ny fiainan-tsi-hita ao amin' ny fiekem-pinoana kristiana
4.1 Ny fiainan-tsi-hita araka ny Fanekem-pinoana apôstôlika
4.2 Ny fiainan-tsi-hita araka ny Fanekem-pinoana atanaziana
Voambolana ao amin' ny Baiboly malagasyModifier
Ny teny hoe fiainan-tsi-hita no nandikana ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy ny teny latina hoe infernus izay midika ara-bakiteny hoe "izay ao ambany". Ny mpanoratra ao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia mampiasa ny tsipelina hoe "fiainan-tsy hita" fa tsy "fiainan-tsi-hita".
Ny teny hoe helo dia fanagasiana ny teny anglisy hoe hell izay mitovy dika amin' ny teny latina hoe infernus, izay nandikana ao amin' io fiteny io ny teny hebreo hoe שְׁאוֹל / sheol sy ny teny grika hoe Γέεννα / gehenna (avy amin' ny teny hebreo hoe גֵי־הִנֹּם‎ / ge-Hinnom) sy Τάρταρος / Tártaros. Tsy ny fiainan-tsi-hita manontolo anefa no tondroin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy amin' ny hoe helo fa "toerana [...] inoan' ny mpivavaka kristianina ho fitoeran' ireo ratsy fanahy teto an-tany ka ijaliany amin' ny tsy fahitany an' Andriamanitra". Ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy kosa mampiasa ny hoe afobe.
Fitoeran' ny matyModifier
Ny teny hoe fitoeran' ny maty dia nandikana ao amin' ny Baiboly katôlika amin 'ny teny malagasy ny teny latina hoe infernus.
Ny teny hoe afobe dia fandikana ny teny latina hoe infernus, ilazana ny toerana ijalian' ny ratsy fanahy amin' ny tsy fahitany an' Andriamanitra. Io no mifanandrify indraindray amin' ny helo na fiainan-tsi-hita prôtestanta malagasy.
Loharano avy amin' ny lovantsofina jiosyModifier
Seôla na SeôlyModifier
Ny Seôla na Seôly, araka ny finoan' ny Jiosy, dia ny fitoeran' ny maty, ny fasana iraisan' ny olombelona rehetra. Tsy fantatra na ny any an-koatra izany na tsia. Ny Baiboly hebreo dia manoritsorita azy ho toerana tsy misy fahafinaretana izay itoeran' ny olona rehetra, na marina na meloka, na mpanjaka na andevo, na tia vavaka na tsy mivavaka, mba hitoerany amim-pahanginana sy hiandrasany ny fiverenany ho vovoka. Tsy izany anefa no iafaran' ny olombelona fa misy ny hovoavonjy avy ao amin' ny Seôla, araka ny lahatsoratra sasany, toy ny hita ao amin' ny Bokin' ny Salamo (Sal. 86.13) sy ny hafa koa.
I Gehena dia lohasaha tery sady lalina eo akaiky atsimo sy atsimo-andrefan' i Jerosalema izay nanamboaran' i Solomona (na Salômôna) toerana avo hivavahana amin' ny andriamanitra Kemôsy sy Môlôka, araka ny Boky voalohan' ny Mpanjaka (1Mpanj. 11.7). Tao no nanaovan' ny Israelita sorona zazakely tamin' i Môlôka araka ny Boky faharoan' ny Mpanjaka (2Mpanj. 23.10) ka noheverina ho toeran' ny fahavetavetana io toerana io. Taty aoriana dia lasa toerana fanariana ny loto rehetra ny ao Gehena sady nisy afo nirehitra tsy an-kijanona mba hisorohana ny aretina pesta. Izany no nahatonga ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao nampitovy ny "gehena" amin' ny "fiainan-tsy hita".
Avy amin' ny teny hebreo hoe גיא הנום / Gei Hinom ("Lohasahan' i Hinoma) na גיא בן הנום / Gei ben Hinom ("Lohasahan' ny zanak' i Hinoma") i Gehena. Ny fandikana amin' ny teny grika ny Baiboly hebreo dia nanoratra hoe Γέεννα / Géenna ka avy amin' io no nanakaran' ny mpandika ny Baiboly amin' ny teny malagasy ny anarana hoe Gehena.
Hita ao amin' ny Matio (5:22, 5:29; 5:30;10:28; 18:9; 23:15, 23:33), Marka (9:43, 9:45, 9:47), Lioka (12:5), Jakôba (3:6) ny fampiasaiana ny teny hoe Γέεννα / Géenna.
Loharano avy amin' ny fedrà grikaModifier
Ao amin' ny fedrà grika dia Tartarôsy no iantsoana ny toerana misy varavaram-by sy tolam-baravarana alimo, izay anonerana ny hadisoana sady ahitana ny fampijaliana rehetra. Ao no ametrahana ireo mpanao heloka bevava. Atao hoe Τάρταρος / Tártaros io toerana io amin' ny teny grika, izay anaran' ny andriamanitra iray manjaka ao amin' io toerana io amin' ny fedrà sy ny finoana grika taloha.
Amin' ny Testamenta Vaovao amin' ny teny grika, amin' ny Epistily faharoan' i Petera (2Pet 2.4) dia ny teny hoe Τάρταρος / Tartaros no ampiasaina: "Fa raha tsy navelan' Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa noroahiny ho any amin' ny helo ka natolony ho ao an-davaka maizina mba hotehirizina ho amin' ny fitsarana" (Ny Baiboly) / "Fa matoa tsy namindra fo tamin' ny anjely nanota Andriamanitra, fa namarina sy nanjera azy any an-davaka maizina izay itànany azy ho amin' ny fitsarana" (Ny Baiboly Masina)"
Ny Fanjakan' i Hadesy na Hadesy, ao amin' ny fedrà grika, dia ny fanjakan' ny maty. Toerana any ambanin' ny tany izany izay anjakan' ilay andriamanitra atao hoe Hadesy, ka izany no ilazana izany toerana izany hoe "fanjakan' i Hadesy". Ny Hadesy ao amin' ny fedrà grika dia tsy mitovy amin' ny an' ny fivavahana kristiana. Amin' ny teny grika dia ᾍδης / Hádēs na Ἅιδης / Háidēs no iantsoana ny Hadesy. Ny Rômana dia manao amin' ny teny latina ny Hadesy hoe Inferni, izay matetika adika amin' ny teny malagasy hoe fiainan-tsy hita na toeran' ny maty.
Hita ao amin' ny Matio (11:23; 16:18), Lioka (10:15), Asan' ny Apôstôly (2:27, 2:31), ny Apôkalipsy (1:18; 6:8; 20:13-14) ny fampiasana ny teny hoe ᾍδης/ Hades.
Fiainan-tsi-hita araka ny BaibolyModifier
Mampiasa ny teny hoe Hadesy ny Testamenta Vaovao hanondroany ny fonenana na ny toetran' ny maty. Amin' ny andalan-tsoratra sasany dia toa maneho toerana sady tsy soa tsy ratsy izay iandrasan' ny maty ny fahafatesana, ny fandevenana, ary ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty ny Hadesy.
Maro ny andalana ao amin' ny Testamenta Vaovao izay misy mihevitra fa azo anatsoahana hevitra fa nidina tany amin' izany fanjakan' ny maty izany i Kristy, mba hitondra ny olo-marina ho any any amin' ny Lanitra na noho ny antony hafa, arakaraka ny fivoasana ata-teôlôjia. Misy andalana hafa ao amin' ny Testamenta Vaovao izay azo anatsoahana hevitra fa toeram-pijaliana ho an' ireo olon-tsy marina izany, ka izany dia mitarika ho amin' ny fiheverana fa mety misaraka roa miavaka tsara izany toerana izany.
Fiainan-tsi-hita ao amin' ny Baiboly prôtestanta malagasyModifier
Asan'ny Apostoly 2.26-27: "Ny nofoko koa hitoetra amin' ny fanantenana; Fa tsy ho foinao ho any amin' ny fiainan-tsi-hita ny aiko; Ary tsy hamela ny Iray Masinao ho tratry ny lò Ianao" (Ny Baiboly).
Apokalipsy 1.18: "dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin' ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita." (Ny Baiboly)
Apokalipsy 6.8: "Ary hitako fa, indro, nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran' izay nitaingina ary atao hoe Fahafatesana, ary ny Fiainan-tsi-hita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin' ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin' ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibi-dia etỳ an-tany." (Ny Baiboly)
Apokalipsy 20.13: "Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita namoaka ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy." (Ny Baiboly)
Apokalipsy 20.14: "Ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita dia natsipy tany amin' ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo." (Ny Baiboly)
Fitoeran' ny maty sy Afobe ao amin' ny Baiboly katôlika malagasyModifier
Andalana ahitana ny hoe "afobe":Modifier
Matio 11.23: "Ary hianao, ry Kafarnaoma, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin' ny afobe hianao, fa raha tany Sodoma no natao ny fahagagana natao tao aminao, dia mbola ho nitsangan-ko tanàna mandraka androany izy." (Ny Baiboly Masina)
Apokalipsa 1.18: "efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin' ny fahafatesana sy ny afobe." (Ny Baiboly Masina)
Apokalipsa 20.14: "Ary ny fahafatesana sy ny afobe dia natsipy tany amin' ny farihy afo: - izany no fahafatesana faharoa: ny farihy afo." (Ny Baiboly Masina)
Andalana ahitana ny hoe "fitoeran' ny maty":Modifier
Asan' ny Apostoly 2.26-27: "Noho izany, ny foko miravoravo, ny lelako mirobiroby, ary ny nofoko hitombina amin' ny fanantenana,fa tsy ho foinao ao amin' ny fitoeran' ny maty ny aiko, ary tsy hatolotrao hafoy ho tratry ny lò ny Masinao." (Ny Baiboly Masina)
Asan'ny Apostoly 2.31: "dia ny fitsanganan' ny Kristy amin' ny maty izay efa tsinjony mialoha no nilazany fa tsy ho foiny ao amin' ny fitoeran' ny maty izy, ary ny nofony tsy ho tratry ny lò.." (Ny Baiboly Masina)
Andalana ahitana ny hoe "Fonenan' ny maty":Modifier
Apokalipsa 6.8: "Dia nijery aho, ka indro nisy soavaly hatsatra, ary ilay nitaingina azy dia atao hoe i Fahafatesana, sady nanaraka azy ny Fonenan' ny maty. Nomena fahefana amin' ny ampahefatry ny tany izy ireo, hamono amin' ny mosary amam-tsabatra, sy amin' ny fahafatesana mbamin' ny biby masiaka ety an-tany." (Ny Baiboly Masina)
Apokalipsa 20.13: "Ny ranomasina namoaka ny maty tao aminy; ny Fahafatesana sy ny Fonenan' ny maty koa namoaka ny azy, dia samy notsaraina araka ny asany avy izy." (Ny Baiboly Masina)
Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe fiainan-tsy hita ao amin' ny Baiboly prôtestanta malagasyModifier
Na dia tsy ahitana ny teny hoe "fiainan-tsy hita" aza ireto andalana manaraka ireto dia mihevitra ny teôlôjiana maro fa mampiasa teny mitovy hevitra amin' ny hoe "fiainan-tsy hita" izy ireo.
1Petera 3.19–20: "19 izay nandehanany sy nitoriany teny tamin' ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia izay tsy nanaiky fahiny, fony niandry ny fahari-pon' Andriamanitra tamin' ny andron' i Noa, raha mbola namboarina ny sambo-fiara, izay nidiran' ny olona vitsy, dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano," (Ny Baiboly). Amin' ny teny grika dia izao no voasoratra: "ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε…."
Efesiana 4.7-10 "7 Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan' i Kristy avy isika rehetra. 8 Koa izany no ilazany hoe: Raha niakatra ho any amin' ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo Ka nanome fanomezana ho an' ny olona (Sal. 68. 18/19). 9 (Ary ny amin' ny hoe niakatra, inona moa izany, afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin' ny tany koa? 10 Izay nidina, dia Izy koa no Ilay niakatra any ambonin' ny lanitra rehetra, hamenoany ny zavatra rehetra.)" (Ny Baiboly). Amin' ny teny grika dia izao no voasoratra: διὸ λέγει, ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.
Ny andininy faha-8 dia fanapahana ny famerenan-teny naitatra avy tamin' ny Salamo 68.18, misy fiovana fijery: "Efa niakatra ho any amin' ny avo Hianao ka mitondra babo; efa nandray fanomezana teo amin' ny olombelona Hianao - eny, teo amin' ny maditra aza,- mba hitoeran' i Jehovah Andriamanitra any." Ny andininy anaty fonosana (Efes 9-10) dia fanazavana famakafakana ny lahatsoratra. Ny teny nadika hoe "ambanin' ny tany" (endrika fampitahana: τὰ κατώτερα / ta katôtera) dia mitovy amin' ny teny hoe "fiainan-tsy hita" ao amin' ny dikan-teny grikan' ny Fanekem-pinoana apôstôlika (ny endrika soperlativa: τὰ κατώτατα / ta katôtata).
Filipiana 2.9-10: "9 Koa izany no nanandratan' Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, 10 mba ho amin' ny anaran' i Jesosy no handohalehan' ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin' ny tany," (Ny Baiboly). Manondro ny fahefana sy ny herin' i Jesoa amin' i Satana ity andalana manana endrika kanto ity, ka tsy midika fa any ambanin' ny tany ny Sheol.
Romana 10.6-8: "6 Fa ny fahamarinana izay avy amin' ny finoana kosa manao hoe: Aza milaza ao am-ponao hoe; Iza no hiakatra any an-danitra? (dia ny hampidina an' i Kristy izany,) 7 na: Iza no hidina any amin' ny lalina? (dia ny hampiakatra an' i Kristy avy any amin' ny maty izany.) 8 Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo am-bavanao sy ao am-ponao (Deo. 30. 12-14), dia ny teny ny amin' ny finoana, izay torinay" (Ny Baiboly). Manondro ny fidinana any amin' ny lalina sady mifangarika amin' ny fiakarana any an-danitra io andalana io.
Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe Afobe na Fitoeran' ny maty ao amin' ny Baiboly katôlika malagasyModifier
Na dia tsy ahitana ny teny hoe "afobe" na "fitoeran' ny maty" aza ireto andalana manaraka ireto dia mihevitra ny teôlôjiana maro fa mampiasa teny mitovy hevitra amin' ny hoe "afobe" na "fitoeran' ny maty" izy ireo.
Efezianina 4.7-10 "Samy manana ny ambaratongany anefa ny fahasoavana nomen' ny Kristy antsika tsirairay avy. Izany no anaovan' ny Soratra Masina hoe: Niakatra any ambony izy, nitondra olona maro ho babo, ary nanome fanomezana maro ho an' ny olona. Inona no ilazana hoe niakatra izy, afa-tsy noho izy efa nidina ho any ambanin' ny tany koa? Ary tsy iza ilay nidina fa ilay niakatra any ambonin' ny lanitra rehetra ihany, mba hamenoany ny zavatra rehetra." (Ny Baiboly Masina)
Filipianina 2.9-11: "Ho valin' izany kosa, dia nasandratr' Andriamanitra ambony indrindra izy, sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba handohalika amin' ny anaran' i Jeso avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etý an-tany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa Jeso-Kristy dia Tompo efa niditra amin' ny voninahitr' Andriamanitra Ray." (Ny Baiboly Masina).
Zakaria 9.11: Ho anao koa, noho ny ran' ny fanekena taminao, no efa hamoahako ny mpifatotrao avy ao an-davaka tsy misy rano." (Ny Baiboly Masina)
Izaia 24.21-22: "Amin' izany andro izany Iaveh hisava any ambony ny tafika any ambony, ary ety an-tany ny mpanjakan' ny tany. Dia hatambatra efa voababo eny amin' ny hantsana sy hohidiana ao an-tranomaizina izy ireo, ka afaka andro maro be, vao hovangiana indray izy.". (Ny Baiboly Masina)
Firesahana ny fiainan-tsi-hita ao amin' ny fiekem-pinoana kristianaModifier
Ny Fanekem-pinoana apôstôlika na Sembolin' ny Apôstôly sy ny Fanekem-pinoana atanaziana na Sembolin' i Atanazy (ilay atao hoe Quicumque Vult) dia milaza ny fidinan' i Kristy any amin' ny fiainan-tsi-hita na fonenan' ny maty io, fa ny Fanekem-pinoana nikeana dia tsy ahitana izany fa milaza fotsiny fa nalevina i Kristy.
Ny fiainan-tsi-hita araka ny Fanekem-pinoana apôstôlikaModifier
Tsy fantatra raha tena avy amin' ny apôstôly marina ity fanekem-pinoana ity, nefa ny lohateniny dia toa milaza fa ny fehezankevitra tsirairay ao amin' io fiekem-pinoana io dia mampahatsiahy izay voasoratra ao amin' ny Testamenta Vaovao, ary ny fanekem-pinoana dia nosoratana tamin' ny vanimpotoana niandohan' ny Fiangonana. Ireto ny andalana ao amin' io fiekem-pinoana io miresaka ny zavatra tokony hinoana momba ny fiainan-tsi-hita na ny fitoeran' ny maty:
(...) Izaho mino an’i Jesoa Kristy, nidina tany ambany tany (...) (Dikan-teny malagasy katôlika)
(...) ary mino an' i Jesoa Kristy, (...) nidina tany amin' ny fiainan-tsy hita (...) (Dikan-teny malagasy FJKM).
(...) Ary mino an' i Jesosy Kristy, (...) nidina tany amin' ny fiainan-tsi-hita (...). (Dikan-teny malagasy loterana)
Ny fiainan-tsi-hita araka ny Fanekem-pinoana atanazianaModifier
Ny Fanekem-pinoana atanaziana na Sembôlin' i Masindahy Atanazy dia fanekem-pinoana kristiana manamafy ny maha Trinite an' Andriamanitra sy ny fifandraisan' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ny fitoviany sy ny fahasamihafany. Noho izy ahitana ny filazana ny amin' ny "fivoahan' ny Fanahy Masina amin' ny Zanaka" (atao amin' ny teny latina hoe Filioque) dia tsy mampiasa azy ny Fiangonana Tatsinanana izay nanohitra izany. Izao ny filazana ny amin' ny fiainan-tsi-hita na ny fitoeran' ny maty ao amin' io fiekem-pinoana io:
"(...) Qui passus est pro salúte nostra, descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis, Ascéndit ad coelos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est judicáre vivos et mórtuos. (...) "
"(...) Izay nijaly hamonjena antsika, nidina tany amin’ ny fiainan-tsi-hita, nitsangana tamin’ ny maty tamin’ ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’ ny Ray izy, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty (...)".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiainan-tsi-hita_(kristianisma)&oldid=1038011"
Dernière modification le 22 Septambra 2021, à 20:10
Voaova farany tamin'ny 22 Septambra 2021 amin'ny 20:10 ity pejy ity.